Guddiga joogtada Baarlamaanka oo kashiraya khilaafka Ganacsatada iyo Wasaaradda Maaliyadda | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Guddiga joogtada Baarlamaanka oo kashiraya khilaafka Ganacsatada iyo Wasaaradda Maaliyadda
Guddiga Joogtada ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa kulan aan caadi aheyn ka yeelanaya khilaafka ka dhex taagay Ganacsatada iyo Wasaaradda Maaliyadda ee ka dhashay canshuur kordhinta lagu soo rogay.
Guddoomiyaha Guddiga Ganacsiga iyo Warshadaha Golaha Shacabka Maxamuud C/raxmaan Beenebeene ayaa sheegay in maanta Guddigooda ay la kulmayaan Ganacsatada, isla markaana wixii ay kala kulmaan ay berri horgeyn doonaan Guddiga joogtada si go’aan looga soo saaro.
“Waxaa maanta Guddiga la kulmi doonaa Ganacsatada, waxaa kala hadli doonaa arrimaha canshuuraha iyo shaqo joojinta ganacsiga, maalinta berri oo talaado ah Guddiga Joogtada ayaa yeelanaya kulan aan caadi aheyn, waxaana horgeyn doonaa wixii aan ka wada hadalnay Ganacsatada, go’aan ayaa laga soo saarayaa”ayuu yiri Xildhibaanka.
Xildhibaan Beenebeene ayaa sheegay inay aad uga xun yahay ganacsiga xirmay iyo saameynta ay ku yeelatay xoogsatada suuqa ee nolol maalmeedkooda ka raadsada Suuqa Bakaaraha.
Maalintii labaad ayaa waxaa xiran Suuqa Bakaaraha oo ah suuqa ugu weyn ee Ganacsiga Koofurta iyo Bartamaha Soomaaliya, waxaana shaqo joojintan ay ka dambeysay cabasho Ganacsatada ka keeneen canshuur lagu kordhiyay.